နောက်ဆုံပေါ်ဆောင်းပါးများ ZEKKEI Japan(2/9)
နှစ်ကုန်မှာ ကျိုတိုကို သွားမယ်ဆိုရင် ? ဒေသခံတွေအကြံပေးကြတဲ့ ပျော်ရွင်ခံစားနိုင်မယ့်နည်းလမ်း ၃ ခု
မိုမိဂျိတွေလည်း နောက်ဆုံးချိန် ရောက်ရှိပြီး ခရီးသွားဧည့်သည်တွေက အရင်ထက် လျှော့နည်းလာတဲ့ ဒီဇင်ဘာလရဲ့ ကျိုတိုဖြစ်တယ်။ ဒီကာလက မြို့တော်ဟောင်းရဲ့ ခမ်းနားတဲ့နှစ်သစ်ချိန်ခါ သွင်ပြင်နှင့် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်း...
တိုကျိုမှ နေ့ ချင်းပြန်သွားနိုင်တဲ့ မပွင့်လင်းသေးတဲ့နေရာ ( ယူးရှင်း လျှိုမြောင် ) ။ လျှို့ ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့ အပြာရောင်ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ခူမခိဆည်ကို အကြံပေးလိုက်တယ် !
※မူရင်းဆောင်းပါးသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီး ရေးသားထားတာဖြစ်တယ်။ ယူရှင်းလျှိုမြောင်ကို ဆက်သွယ်နေတဲ့ ခူရိုခူရသစ်တောလမ်းသည် ကျောက်တုံးများ လဲပြိုနေတဲ့အတွက်ကြောင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝ...